Qarax xooggan oo goor-dhow ka dhacay xaafadda Islii ee mag. Nairobi - calanka.com
Qarax xooggan oo goor-dhow ka dhacay xaafadda Islii ee mag. Nairobi (Calanka.com) - Posted at 05/12/2012 By Saadaq
Warar horudhac ah ayaa ka soo baxaya qarax caawa ka dhacay xaafada Islii ee magalada Nairobi,qaraxani ayaa waxaa uu ka dhacay qaybta Saddexaad ee xaafada Islii,waxaana ilaa iyo hada ku dhaawacmay 8-ruux oo dhamaantod ah dad shacab ah.
Dadka ku dhaawacmay qaraxani ayaa la dhigay cusbitaal ku yaala Bartmaha xaafada Kamagunji,halkaasi oo lagu dabiibayo waxaana soconaya baaritaano xoogan oo booliska Nairobi ay ka wadaan xaafada islii,warar horudhac ah oo soo baxaya ayaa sheegaya in ay jiraan dad ciidamada ay ka qabteen halka qaraxa ka dhacay.
Maaha markii ugu horeysay oo qarax noocan ah uu ka dhaco xaafada Islii,Laba Toddobaad ka hor ayaa qarax lala eegtay bas nooca dadka qaada ah ayaa waxaa ku dhintay Dad farabadan taasi o ka dhasheen rabshado ka dhacay Xaafada islii ee magalada nairobi.
Waxaa hatan yaraaday isku socodka xaafada dhexdeeda waxaana soconaya baaritaano ciidamada ka wadaan wadooyinka,iyadoo warar soo baxaya ay sheegayan in dad laga qabtay wadooyinka xaafada islii
Wixii ku soo kordha kala soco Calanka.com